Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, March 03, 2010 Wednesday, March 03, 2010 Labels: လူမှုရေးရာ
အဲဒီညနေမှာ ကောင်မလေးရဲ့ အဖေနဲ့အမေဟာ ကိစ္စ တစ်ခုနဲ့ အပြင်ထွက်သွားတော့ အိမ်မှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်.. တစ်အိမ်လုံးလဲ ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ နေပါတယ်... အဲဒီ အချိန်လေးမှာ တံခါးခေါက်သံတစ်ခုက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြိုခွင်းပြီး ပေါ်ထွက် လာပါတယ်.. တံခါးခေါက်သံကြောင့် ကောင်မလေးဟာ တံခါးကို သွားဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အိပ်မက်ထဲက အဖွားကြီးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ အတွက် ကြက်သီးမွေးညှင်းများ ထောင်ထလာအောင် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့မိပြီး ကြက်သေ သေနေမိ ပါတော့တယ်.. အဖွားအိုက ကောင်မလေးကို စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်လိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ကောင်မလေးထက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို သူ့ရဲ့ အသံ အက်ကွဲကွဲနဲ့ စကားတစ်ခွန်း ပြောလိုက်ကာ အိမ်ရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်သွားပါတယ်.. ကောင်မလေးဟာ တုန်လှုပ်ခြင်းများစွာနဲ့ သူမလက်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အရာလေးကို အထိတ်တလန့် ကြည့်လိုက်မိပါတယ်… သူမ တွေ့လိုက်တဲ့ ဟာလေးက လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာ .... အဲဒါလေးက …… ? ? ?
အဖွားကြီး ပြောသွားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့ “ဒီဆပ်ပြာ နဲ့ လျှော်မှ စင်မှာ” တဲ့… :) :) :)
ဆပ်ပြာမှုန့်ကြော်ငြာတာ ဟုတ်ဘူးနော်... :P
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 02, 2010 Tuesday, March 02, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
ခုတစ်လော ကျွန်မတို့ သုံးနေတဲ့ Mylovecafe Server က အခက်အခဲ တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတော့ ဘလောဂ့်က ၀င်မရ တဲ့ ဒုက္ခကို ခနခန ကြုံနေရတယ်.. အဲလိုဖြစ်တော့ စာရေးရတာလဲ စိတ်က မလန်းဆန်းဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့နော်.. ခုတော့ ကော်ဖီဆိုင်လေး ပြန်ကောင်းပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့ Missgreenlady Cafe ကို လာလည်တဲ့ သူတွေကို ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ အတူ ပြုံးစရာလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ ဧည့်ခံပါမယ်နော်.. ခုလောလောဆည်တော့ ကျွန်မကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေဘဲ ရေးခွင့် ပြုစေချင် ပါတယ်.. လေးလေးနက်နက် ရှိတာတွေ ကိုတော့ ဘလောဂ့်ကြီး ကောင်းကောင်း အဆင်ပြေသွားရင် အကောင်းဆုံး ပြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစား ပါ့မယ်.. ကိုယ့်ဘလောဂ့်ထဲကို ကိုယ်တိုင်လဲဝင်မရတော့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ စာရေးဖို့ စာလုံးတွေလဲ မထွက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ .. ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်…
ဒီနေ့ ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးက စာဖတ်သူတွေကို ဘာဗဟုသုတ၊ ဘာရသမှတော့ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဖတ်ပြီး ရယ်မောရမဲ့၊ ပြုံးမိစေနိုင်မဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ အမှတ်တရ အဖြစ်ကလေးကို ရေးမှာပါ… ငယ်စဉ်ဘ၀ အကြောင်းအရာဆိုတာ မေ့သွားတဲ့ အဖြစ်လေးတွေရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလာတဲ့အခါ ပြန်သတိရတတ်တာလေး တွေလဲ ရှိတတ်တယ်မဟုတ်လား.. ခုလဲ တိုက်ဆိုင်မှုလေး တစ်ခုကြောင့် ပြန်သတိရလာတယ် ဆိုရမယ်.. အဲဒီချိန်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ပုံက ဒီလိုပါ…
ကျွန်မ ငယ်စဉ်က ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့မှာ ကျောင်းတက်ပါတယ်.. ဇာတိကတော့ မိုးကောင်းမြို့ မဟုတ်ပါဘူး.. မိုးကောင်းနဲ့ မိုင် ၇၀ လောက်ဝေးတဲ့ တစ်နေရာကပါ.. မိုးကောင်းမြို့ကလေးဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြို့ကလေးပါ.. မိုးကောင်းသူတွေကလဲ ချောကြပါတယ်.. ဒီထဲမှာ ကျွန်မတော့ မပါဘူးပေါ့လေ.. ကိုယ်က မိုးကောင်းသူမှ မဟုတ်တာကိုး.. ချောတဲ့စာရင်းထဲ ဘယ်ဝင်ပါ့မလဲနော်.. ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်း လေးတွေကလဲ ချောချော မောမော လှလှပပလေးတွေပါ… ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် အတူတူ သွားလာနေကျ၊ သိပ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ သူတွေပါ.. ဘင်ခရာ သင်တန်းတို့၊ ကြက်ခြေနီတို့ စတဲ့ သင်တန်းတွေ အတူတူတက်နေကျ ကိုယ့်အိမ်သူ့အိမ် အိပ်နေကျ အဲလို ခင်မင် ရင်းနှီးလာသူတွေပါ...
တစ်နေ့တော့ အတန်းထဲမှာ ဆရာမက မြန်မာစာသင်နေတုန်း ကျောင်းဆင်းဖို့ကလဲ နာရီဝက်အလိုမှာ ကျွန်မဘေးမှာ ထိုင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးက အိမ်သာ သိပ်တက်ချင်နေကြောင်း ပြောပါတယ်.. နာရီကြည့်လိုက်တော့လဲ ကျောင်းဆင်းဖို့က သိပ်မလိုတော့ ကျောင်းဆင်းတဲ့ထိ စောင့်လိုက်ပါဦးလို့ သူငယ်ချင်းကို ပြောပါတယ်.... သူငယ်ချင်းကလဲ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့ပြီး မအောင့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့.. ဒါနဲ့ ၂ယောက်သား ဆရာမကို ခွင့်တောင်းပြီး အိမ်သာဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ ၉တန်း ကျောင်းဆောင်နဲ့ အိမ်သာရှိတဲ့နေရာဟာ အတော်လေးကို ဝေးပါတယ်.. အဲဒီအချိန် ကာလကလည်း မိုးတွင်းဆိုတော့ မိုးရွာထားတာနဲ့ အိမ်သာသွားတဲ့ မြေနီလမ်းကလေးက ရေတွေနဲ့ ခပ်လျှောလျှောပေါ့.. သူငယ်ချင်းက အိမ်သာ အရမ်း တက်ချင်နေတဲ့သူဆိုတော့ ရှေ့ကနေ ခြေလှမ်းသုတ်သုတ်နဲ့ အပြေးတစ်ပိုင်း သွားနေ ပါတယ်..
အဲဒီခေတ်က မိုးကောင်း အထက (၁)ရဲ့ ကျောင်းအိမ်သာတွေဟာ ရေလောင်းအိမ်သာ မဟုတ်သလို အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်သာတွေ မဟုတ်ပါဘူး.. မြေကျင်းကို တူးပြီး အဲဒီမြေကျင်းပေါ်မှာမှ သစ်သားနဲ့ သွပ်အမိုးမိုးထားတဲ့ အိမ်သာကို အလုံးလိုက် ချထားတာပါ.. ဒီနေရာမှာ ကျင်းပြည့်သွားပြီဆိုရင် နောက်တစ်နေရာကို ကျင်းအသစ်တူးပြီး အိပ်သာကိုရွေ့လိုက်ရုံဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျောင်းသားများစွာ သုံးထားတော့ အချို့ အိမ်သာတွေက ပြည့်လုမတတ် ဖြစ်နေပါပြီ.. စွန့်ထားသမျှ အကုန်လုံးကိုလဲ မမြင်ချင်လဲ မြင်နေရက်သား အနံ့ကိုလဲ မရချင်လဲ ရှူရက်သား ဖြစ်နေရပါတယ်.. အိမ်သာ တက်ချင်သူ တို့ရဲ့ ထုံးစံ သူငယ်ချင်းခမြာ အိမ်သာနားနီးလေ ခြေလှမ်းတွေက ပိုစိတ်လာလေ ဖြစ်လာ ပါတယ်.. နီးလာလေ အိမ်သာပိုတက်ချင်လေ ဆိုတာ ခံစားဖူးသူများ သိပါ လိမ့်မယ်နော်… :) :) :)
အဲလိုနဲ့ အပြေးကလေး လျှောက်နေရင်း အိမ်သာရှေ့အရောက်မှာ မိုးရေနဲ့ လျှောနေတဲ့ မြေနီလမ်းကြောင့်ရော၊ အိမ်သာတက်ချင်ဇောနဲ့ လောကြီးလွန်းနေတဲ့ စိတ်ကြောင့်ရော ပေါင်းပြီး သူငယ်ချင်းမလေးဟာ ခြေချော်ပြီး အိမ်သာကျင်းထဲ လျှောခနဲ ကျသွားပါ တော့တယ်.. ကံကောင်းချင်တော့ အိမ်သာဟာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ အပြည့် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ခြေထောက်ကြီး ၂ချောင်းလုံးဟာ အဲဒီ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုံထဲ ၀င်စိုက်မိနေပြီး ခါးအထက် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ဝက်ကတော့ ကျင်းအပြင်မှာ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်.. မြင်ယောင်ကြည့်ကြပါနော်.. တကယ်လို့များ အိမ်သာကျင်းသာ အသစ်စက်စက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ လူတစ်ကိုယ်လုံး ကျင်းထဲကို ကျသွားခဲ့မှာ သေချာပါရဲ့.. အိမ်သာကြီး ပြည့်နေတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်စရာပေါ့နော်...
ကျွန်မလဲ အပြေးကလေးသွားပြီး သူငယ်ချင်းကို သွားဆွဲထူရပါတယ်.. သူငယ်ချင်းဟာ ရှက်တာရော၊ ဒေါသထွက်တာရော၊ ရွံတာရော၊ အိမ်သာတက်ချင်တာတွေရော ပေါင်းပြီး မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဟာ နီရဲနေပါတယ်.. မျက်ဝန်းမှာလဲ မျက်ရည်က ခပ်စို့စို့… သူ့ခြေထောက် တစ်ခုလုံးလည်း မြင်မကောင်းအောင် ပေကျံနေပါတော့တယ်.. ဘာပြော ကောင်းမလဲနော်.. အနံ့ကတော့ ထောင်းထောင်းကို ထလို့ပေါ့.. သူငယ်ချင်းလဲ အိမ်သာထဲ ခပ်သုတ်သုတ်ဝင်လိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကျောင်းခန်းထဲ ပြန်မ၀င်တော့ဘဲ အိမ်ကို ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ကျောင်းနဲ့ မနီးမဝေးက သူ့အိမ်ကို ပြန်ပြေး ပါတော့တယ်.. ဆရာမကိုတော့ နေမကောင်းလို့ ပြန်သွားကြောင်း ကျွန်မက အသိပေးလိုက်ရပါတယ်..
ကျောင်းဆင်းတော့ သူ့လွယ်အိတ်ကို ကျွန်မကဘဲ သူ့အိမ်ကို သွားပို့ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီအချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းက ရေမိုးချိုး သန့်စင်ပြီးနေပါပြီ.. ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆပ်ပြာ ဘယ်နှတုံးကုန်ပြီး အချိန် ဘယ်လောက် ကြာမယ်ဆိုတာတော့ သူငယ်ချင်းလေး အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်မ သူ့ကို မေးမနေတော့ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အနံ့အသက်က ကျန်နေသေးတယ်လို့ကို ထင်မိပါတယ်.. ဒါကြောင့် သူ့ရှေ့မှာ နှာခေါင်းလေးကို ရှုံ့ပွရှုံ့ပွ လုပ်လိုက်မိတော့ သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကို လိုက်ရိုက် ပါတော့တယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်မကို ကတိတစ်ခုတောင်းပါတယ်.. နင်ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးနော်.. ငါ့ကို ကတိပေးနော်တဲ့ … ကျွန်မလဲ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီအကြောင်းကို ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒီနေ့အထိ မပြောခဲ့ပါဘူး.. ဘယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကမှ ဒီအဖြစ်ကို မသိလိုက်ကြပါဘူး.. ခုချိန်ထိလဲ ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရသေးပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ရေးချင်စိတ် သိပ်ဖြစ်လာတာနဲ့ ဘလောဂ့် စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းရေ ငါဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူးကွာ.. ကတိတည်ပါတယ်နော်… ခုလဲ စာလေးနဲ့ဘဲ ရေးတာပါ.. ငါ့ပါးစပ်က တစ်ခွန်းဆို တစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့ပါဘူးနော်… :) :)
မွန်းကြပ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ရယ်စရာ သက်သက်အနေနဲ့ ငယ်ဘ၀နဲ့ သူငယ်ချင်း အကြောင်း အမှတ်တရ ရေးခြင်းပါ.. ရသတစ်ခုခု မပေးနိုင်မှန်း သိပါတယ်.. ဟာသလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ဖတ်သွားပေးကြပါနော်..
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၃)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, March 01, 2010 Monday, March 01, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
ကျွန်မတို့ ဘလောဂ့်တွေ ဒီရက်ပိုင်း ၀င်မရတဲ့ဒုက္ခ ခနခနဖြစ်နေတော့ စာတွေလဲ မရေးနိုင် ဖြစ်နေမိပါတယ်.. စိတ်လဲ ညစ်တာပေါ့နော်.... ဒီတော့ လေးလေးနက်နက် စာလေးတွေ မရေးနိုင်ဘဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်မဲ့ ရယ်စရာလေးတွေဘဲ တွေးချင် နေမိတယ်.. ဒါကြောင့်လဲ စာဖတ်သူများကို စိတ်ပေါ့ပါးမဲ့ ရယ်စရာ လေးတွေကိုဘဲ လောလောဆည် မျှဝေ ပေးပါရစေနော်...
၁. ကောင်လေး။ ။ ရှင် ..ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းကို ချစ်တာသေချာလား..
ကောင်လေး။ ။ သေချာပါတယ်ကွာ.. ကိုယ်မနေ့ကဘဲ ကိုယ့်ရည်းစားစာရင်းကို သေချာ ပြန်စစ် ကြည့်ပြီးပြီ..
၂.ဆရာမ။ ။ ကိုယ်ပြောနေတာကို စိတ်ဝင်စားမှန်းမသိ၊ မ၀င်စားမှန်းမသိဘဲ
စကားတွေ ဇွတ်ပြီး ပြောနေတဲ့ သူမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ
၃. စားပွဲထိုး။ ။ ဆရာ ကော်ဖီက ဘလက်ကော်ဖီဘဲ ယူမှာလားခင်ဗျာ
စားသုံးသူ။ ။ မင်းတို့ဆိုင်မှာ ကော်ဖီက ဘာအရောင်နဲ့များ ရသေးလို့လဲ?
၄. ကောင်လေး။ ။ကိုယ် မင်းလက်ကလေးကို ကိုင်ထားပါရစေ
ကောင်မလေး။ ။နေပါစေ ကျွန်မလက်က ဒီလောက် မလေးပါဘူး..
၅.တရားဟောဆရာ။ ။ဆမ်.. ငါ့ကို အမှန်အတိုင်းပြောစမ်း မင်းဟာ ထမင်းမစားခင်မှာ ဆုတောင်းလား. မတောင်းဘူးလား?
ဆမ်။ ။ ဆုတောင်းဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ.. ကျွန်တော့အမေက ဟင်းချက် ကောင်းပါတယ်…
၆.လူနာ။ ။ ဒေါက်တာ ကျွန်တော့အခြေအနေလေးသိပါရစေ.. ကျွန်တော် ပြန်ကောင်းလာဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိသေးရဲ့လား ခင်ဗျာ?
ဆရာဝန်။ ။ ရှိပါတယ်ဗျ ၁၀၀% တောင် ခင်ဗျားအတွက် အခွင့်အလမ်း ရှိတယ်.. ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျားလို ရောဂါမျိုးက ၁၀ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်က သေနိုင်ပြီး တစ်ယောက်ဘဲ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ရှိတာဗျ.. ဒီတော့ စိတ်မပူနဲ့ ခင်ဗျားလို ရောဂါဖြစ်တဲ့သူ ကိုးယောက်လောက်က သေသွားပြီ ခင်ဗျားက ၁၀ယောက်မြောက်ဘဲ.
၇.ဆရာမ။ ။ ကဲ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုခုကို နမူနာ ပြောပြ စမ်းပါဦးကွယ်..
ကျောင်းသား။ ။ကျွန်တော့အဖေနဲ့ အမေဟာ တစ်ချိန်တည်း တစ်နေရာတည်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ် ဆရာမ.
၈.ဆရာမ။ ။ ဂျောခ်ျ့ဝါရှင်တန်ဟာ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သူ့အဖေ သိပ်နှစ်သက်တဲ့ ချယ်ရီပင် လေးကို ပုဆိန်နဲ့ ခုတ်လှဲပစ်လိုက်တယ်.. ဒါပေမဲ့ သူ့အဖေက သူ့ကို အပြစ် မပေးခဲ့ဘူး.. အဲဒါဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ဘယ်သူသိလဲ?
ကျောင်းသား။ ။ သူ့လက်ထဲမှာ ပုဆိန် ကိုင်ထားဆဲဖြစ်လို့ပါဆရာမ
၉.ဆရာမ။ ။နေနဲ့ လ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး တို့တွေအတွက် အရေးကြီးတယ် ထင်သလဲ
ဆရာမ။ ။ဘာဖြစ်လို့လက ပိုအရေးကြီးတာလဲ?
ကျောင်းသား။ ။လက ကျွန်တော်တို့ အလင်းရောင် လိုအပ်နေတဲ့ ညမှ ပေါ်လာပြီးတော့ နေကတော့ အလင်းရောင်မလိုအပ်တဲ့ နေ့လည်မှ ပေါ်လာလို့ပါ။
၁၀. ဆရာမ။ ။ဆမ် မင်းဟာတော်တော်ကို စကားများပါလား
ဆမ်။ ။ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးက စကားများတဲ့ မျိုးရိုးမို့ပါ
ဆရာမ။ ။ပြောစမ်းပါဦး မင်းတို့မျိုးရိုးက ဘာတွေမို့လဲ
ဆမ်။ ။ကျွန်တော့ အဖိုးက နိုင်ငံရေးတရားဟောတဲ့သူ၊ ကျွန်တော့် အဖေ ကတော့ ကျောင်းဆရာ
ဆမ်။ ။ကျွန်တော့အမေက မိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ.. (ဟွန့်.. ဒါတော့ လက်မခံဘူး... ကျွန်မကတော့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ စကားမများပါဘူး) :) :) :)